मनोरन्जन Archives -
स्कुलमा व्यवहारिक रुपमै सिकाइन्छ स’म्भोग, गृहकार्य समेत…
रिया–महेश भट्टको ह्वाट्सएप च्याट सार्वजनिक, के महेश भट्टले भनेपछि…
काठमाडौं, भदौ । मोटोपन भएका मानिसहरुलाई शरिरको तौल घटाउन धेरै नै समय लाग्छ । शरिरलाई स्लिम राखिराख्न मानिसहरु बिहान मर्निङ वाक गर्ने र जिम धाउने गर्छन् । यस्तै अभिनेत्रीहरु पनि शरिरलाई स्लिम बनाउन मिहेनत गरिरहेका हुन्छन् । नेपाली चलचित्र…
अन्ततः नायिका पूजा र पत्रकार सुवेदीबीच मिलापत्र
काठमाडौं । अन्ततः नायिका पूजा शर्मा र पत्रकार प्रकाश सुवेदीबीच मिलापत्र भएको छ । एपीवान टेलिभिजनका मालिक क्याप्टेन रामेश्वर थापाको पहलमा दुवैबीचको झग'डा मिलापत्रमा टुंगिएको हो । नेपाल कलाकार संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्कालगायतले नायिका र…
काठमाडौं, ३ भदौ । लोकप्रिय गायिका, संचारकर्मी तथा नेतृ कोमल वलीले अहिलेसम्म आँफु प्रेममा नपरेको बताएकी छिन् । मध्यममवर्गिय परिवारमा जन्मिए हुर्केकी कोमललको नेता बन्ने सपना बल्ल आएर पूरा भएको बताउँछिन् । दागंबाट ४४ सालमा गीत गाउन काठमाडौँ…
नागिनको अवतारमा मनिषादेखि श्रीदेवीसम्म आउँदा फिल्म सुपरहिट
बलिउड होस् वा भारतीय टेलिभिजन नाग र त्यसमा आधारित कथाले स्थान पाउने गरेका छन् । एकता कपूरको चर्चित टेलिभिजन सिरीयल नागिनको हरेक वर्ष झै कुनै न कुनै टेलिभिजन पर्दा पाउने गरेको छ । नाग, नागिनको कथालाई फिल्मी पर्दामा भारतीय दर्शकले निकै…
अ’श्लिल गा’ली दिँदै सोनिका, के हो कारण ?
काठमाडौं, १ भदौ । मोडल तथा युट्युबर सोनिका रोकाया बेलाबखतमा चर्चा र विवादमा आउने गरेकी छिन् । केही समय अघि पूर्व युवराज पारश शाहसँगको हि'मचीमका कारण चर्चामा आएको रोकाया आज एकाएक पुन चर्चामा आइन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रोकायाले लाइभ…
TK	 Aug 17, 2020 0
गुल्मीको तम्घासस्थित होटल मझेरी । एउटा कोठामा अप्सना थापा बस्छिन्। कालो वानपिस पहिरनमा अप्सनाले कामुक मुस्कान छर्दै भनिन्, ‘यतिसम्म त देखाउन सक्छु ।’ तर उनी विस्तारै खुल्दै थिइन् । झ्यालबाट रेसुंगा लेक छर्लंग देखिन्थ्यो । उनी त्यतैतिर…
वरिष्ठ अभिनेत्री सुभद्रा अधिकारीको मृ’त्यु भन्दै समाचार एकाएक भा’इरल भएपछि….
काठमाडौं, १ भदौ । एक वर्ष अगाडी निधन भएकी बरिष्ठ कलाकार शुभद्रा अधिकारीको निधन भन्दै एउटा मिडियामा अचानक समाचार आएपछि अहिले त्यो न्युज सामाजिक सञ्जालमा निकै तिब्र रुपमा भाइरल भएको छ । मिडियामा अचानक निधन भन्दै लेखे पछि एकै छिनमा समाचार…